ကျနော်တို့ EXETER ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ TINDER ရက်စွဲထိတ်လန့်ပုံပြင်များအကြောင်းကိုမေးခဲ့တယ်, WOW ဤအချို့ဆိုးရွားဖြစ်ကြသည် - သတင်း
ကျနော်တို့ Exeter ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ Tinder ရက်စွဲထိတ်လန့်ပုံပြင်များအကြောင်းကိုမေးခဲ့တယ်, wow ဤအချို့ဆိုးရွားဖြစ်ကြသည်
အများကြီး clubbing မြင်ကွင်းတစ်ခုကဲ့သို့, Exeter ရဲ့ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအနည်းဆုံးပြောကန့်သတ်သည်။
သငျသညျ Tinder အပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်လမ်းဖြတ်ကူးအဖြစ်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားမှာအဆင်မပြေပြုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်သို့မဟုတ်ထွက် TP ပေါ်မှာသင်တို့နှင့်အတူလိုက်ဖက်ပါတယ်လူတိုင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။
Exeter ဆီကသင့်ရဲ့အဆိုးဆုံး Tinder ရက်စွဲဇာတ်လမ်းတွေကိုပို့ပေးပါလို့လူကြီးမင်းတို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
Frankie Jonas ကောလိပ်ကိုဘယ်မှာသွားသလဲ
ကျနော်တို့ရက်စွဲတစ်ခုကနေ Impy ကိုသွားခဲ့တယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာငါမှာခုနစ်ခါလောက်ရှိတုန်းကပိုင့် ၂ ကောင်ရှိတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့အော့အန်တာကိုသူမနိုးထမချင်းအိပ်ရာထချိန်အထိသူမဘာမှမှားနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါတွန်းချလိုက်ပြီးသူကကျွန်တော့်ကော်ဇောတွေအကုန်လုံး chunders ။ ထို့နောက်သူသည်ငါ၏ en-suite အတွက်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှမိနစ် 20 အန်သုံးစွဲသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူပြီးဆုံးသွားသောအခါသူသည်လမ်းလွဲ သွား၍ ကျွန်ုပ်ရှုပ်ထွေးနေသောမျက်နှာကိုကြည့်။ သူဘာမျှမမှားပါက 'ဘာလဲ' ဟုပြောဆိုသည်။
ငါသူ့ကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဟုပြောစရာမလိုဘဲသူ (Yikes!) အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အားပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
တစ်ခါတလေ Tinder မှာယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့နေ့စွဲတစ်ခုမေးခဲ့တယ်၊ ငါရောက်လာတဲ့အခါသူကသူ့ကဒ်မရှိတဲ့အတွက်ပေါင် ၁၅၀ ကိုထုတ်ယူခိုင်းတယ်။
ပထမ£ 150? သူဘယ်မှာသွားပြီးအများကြီးသုံးဖို့သွားဖို့စီစဉ်နေတာလဲ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကဒ်အကြောင်းပြချက်သည်ယခုအိုမင်းနေပြီဖြစ်သည်။ မည်သူမျှရက်စွဲတစ်ခုတွင်သူတို့၏ကဒ်ကိုအမှန်တကယ်မေ့နေကြသည်။
တစ်ခါတုန်းက Tinder နေ့ရက်ကိုရောက်ခဲ့ဖူးပြီး veggie သွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်သူကသူအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာသူဘယ်လိုပုံသွင်းတယ်၊
အဖြစ် #vegan ။ သူတို့ကိုသင်အခွင့်အရေးပေးသလား။ #animalrights pic.twitter.com/5U3Jcbxuap
- Fish Live Live (@letfishlive) ပြီလ 2, 2018
အဘယ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နူးညံ့သောအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်! ရှဥ့်ကိုစားတာကနည်းနည်းတော့လူမိုက်ပါပဲ။
တခါက Tinder ကနေမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို Bella Italia ကိုမေးခဲ့တယ်။ သူမထိုညနေခင်းတွင်ကလေးထိန်းရန်ရည်ရွယ်ထားသောကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူတက်ခဲ့သည်။
ရက်စွဲသည်အလွန်အဆင်မပြေဟုဆိုရန်မလိုပါ။ သူမအားည ၉ နာရီတွင်ကလေးငယ်များကိုအိပ်ရာထဲထားစေခဲ့သည်။
သူ၏ ဦး နှောက်၏ဓာတ်ပုံပတ်ပတ်လည်သယ်ဆောင်သူ
ငါဒီကောင်လေးနဲ့ Tinder နေ့စွဲကိုသွားခဲ့တယ်။ သူကသူ့ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးတဲ့ပုံနှိပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အထိအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ငါသည်ဤနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်နှင့်နောက်တဖန်သူ့ကိုမမြင်ရ။
နောက်ဆုံးငါကြားခဲ့ရတာကလူတွေကိုမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြသခြင်းဟာအကြီးအကျယ်အလှည့်အပြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ငါ Tinder ကနေဒီမိန်းကလေးနှင့်အတူအနည်းငယ်ရက်စွဲများအပေါ်သွား၏။ အားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့သွားပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးသတ္တုတွင်းကိုပြန်သွားကြတယ်။
TP ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရောက်တော့ငါတခြားမိန်းကလေးအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ ငါနံနက်ယံ၌ထနအောက်ထပ်သို့သွား။ , ငါထွက်ခွာသောအခါငါမီးဖိုချောင်ထဲမှာ Tinder ကနေမိန်းကလေးကိုမြင်တော်မူ၏။
နှစ်ခုမိန်းကလေးငယ်များ housemates ခဲ့ကြသည်ထွက်လှည့်။ ငါသူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။
ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ Tinder နေ့မှာ Waterfront စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာရှိနေတုန်းသူကသူကစိတ်ဆိုးအစာအိမ်ရှိကြောင်းပြောတယ်။
ထို့နောက်သူကကျွန်တော့်ကိုဆက်လက်ပြောပြသည်မှာသူသည်မုန့်ညက်တဝက်ခန့်တွင် loo သို့သွားစဉ်သူသည်မိမိဘောင်းဘီကိုညှပ်ပြီးအိမ်သာအတွင်း၌သူ၏အတွင်းခံများကိုထားခဲ့သည်။
သငျသညျမည်မျှ xanax ထွက်ခေါက်ရန်
သူပြန် loo ပြန်သွားတဲ့အခါသူတို့ပျောက်သွားကြပြီ။
•ကျွန်ုပ်တို့သည် Exeter ကျောင်းသားများကိုအဆိုးရွားဆုံးသော Valentine Day အဖြစ်အပျက်များကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးသင်စိတ်ပျက်ခဲ့မိသည်
•ဖိုရမ်တွင်ဖက်ရှင် - ချစ်သူများနေ့အတွက်ထုတ်ဝေသည်